Koox Qorshaynaysay Falal Budhacad-badeed Oo Lagu Fashiliyay Duleedka Magaalada Berbera | Araweelo News Network (Archive) -
Koox Qorshaynaysay Falal Budhacad-badeed Oo Lagu Fashiliyay Duleedka Magaalada Berbera
Berbera(ANN) Ciidamada Booliska iyo kuwa Marineska Somaliland ayaa fashiliyay Koox qorshaynaysay inay falal budhacd-badeed ka abaabulaan duleedka magaalada berbera, kadib markii Laash la rumaysan yahay inay kooxdaasi ku fuliyaan fal Budhacd-badeed uu ka caaryay
xeebta magaalada Berbera, isla markaana ay ciidanka Booliska iyo Marinska Badu ka war heleen oo ay duleedka dhinaca galbeed ee xeebta Berbera kasoo jiideen Laashka.
Qaar ka mid ah Saraakiisha ciidanka Booliska oo ka gaabsaday in la magcaabo ayaa u xaqiijiyay shebekada wararka ee Araweelonews inay ciidamada amaanku gacanta ku dhigeen Laashkaa oo ay kooxdii wadatay ka carartay markii uu caaryay, isla markaana ay ku baxsadeen gaadhi noociisu yahay Surf. Warku wuxuu intaa ku daray in laba Nin oo ka mid ah kooxdaa oo ah Inan iyo Aabihii laga soo qabtay shalay dhinaca magaalada Burco. Kadib markii la aqoonsaday, isla markaana loosoo dhaadhiciyay xabsiga magaalada Berbera oo ay ku xidhan yihiin. Sidoo kalena magaalada Berbera laga qabtay Nin farsamayaqaan ah oo la rumaysan yahay inuu gacan siinayay iyo laba mashiin oo nooca daba-kasaarka ah oo midkiiba yahay 40khayl. Laakiin qaar ka mid ah saraakiisha Booliska ayaa xusay in qaar ka mid ah kooxdaa oo baxsaday ay ku raad joogaan, isla markaana aanay wax war ah ka bixinayn ilaa ay gacanta ku wada dhigaan.
Kooxdan ayaa wararku sheegayaan deegaanka Ceel Daraat oo ah duleedka dhinaca Bari ee magaalada Berbera doonayeen inay ku diyaar garoobaan. Laakiin ay ciladi ka gashay Laashkii ay wateen, taas oo keentay inuu ka caaryo duleedka dhinaca galbeed ee magaalada marsada ah ee Berbera.
Maaha markii ugu horaysay ee magaalada Berbera iyo nawaaxigeeda koox looga shakiyay inay qorshaynayaan falal budhcad-badeednimo laga soo qabto, balse kooxdan ayaa wararku sheegayaan ilaa hada kuwa la hayaa inay yihiin muwaadiniin u dhalatay Somaliland, taas oo ka duwan kooxihii sidan oo kale hore loogu qabtay inay qorshaynayeen falal budhacd-badeed.
Xabsiyada Somaliland waxa ku jira ku dhowaad laba boqol oo qof oo loo haysto falal budhacd-badeed, kuwaas oo intooda baddan xukumo kala duwani ku dhaceen.